Ndị na-arụ ọrụ laptọọpụ na-echekarị mkpa ịchọta onye ọkwọ ụgbọala kpọmkwem. N'ihe gbasara HP 635, a ga-eme usoro a n'ọtụtụ ụzọ. Ebe ọkwọ ụgbọala maka HP 635 Ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ dị irè iji wụnye software dị mkpa. A na-atụle isi ndị a n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Iji jiri akụrụngwa ọhụrụ, ị ga-ebu ụzọ ibudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ya. N'ihe banyere Canon MP495, a ga-eme nke a n'ọtụtụ ụzọ. Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka Canon MP495 E nwere ọtụtụ nhọrọ maka otu esi enweta software dị mma. Ihe kachasị dị irè na ọnụ ọnụ ga-atụle n'okpuru ebe a.
Ịrụ ọrụ arụmọrụ nke PC adịghị adabere nanị na njikọ ha na ibe ha, kamakwa na enwere ngwanrọ n'ezie. Ị nwere ike iwunye ọkwọ ụgbọ ala na AMD Radeon HD 6800 Series kaadị eserese dị iche iche, mgbe ahụ, anyị ga-ele anya na nke ọ bụla n'ime ha. Ọkwọ ụgbọala maka AMD Radeon HD 6800 Series Ihe nlereanya nke nsụgharị ndị a na-esiteghị na nke ọhụrụ, ya mere, mgbe oge ụfọdụ, nhọrọ ụfọdụ nke ịkwọ ụgbọala nwere ike ịghọ oge ochie.
Ndị ọrụ nke emulator software optical (Daemon Tools, Alcohol 120%) nwere ike izute ozi banyere enweghị SCSI Pass Site Direct ọkwọ ụgbọala mgbe ị na-agba ọsọ software. N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa ebe na otu ị nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala maka akụrụngwa a. Hụkwa: Error SPTD ọkwọ ụgbọala na Daemon Tools SCSI Na-agafe Nduzi Ọkwọ ụgbọala Nke mbụ, okwu ole na ole gbasara mpaghara a na ihe kpatara ya ji dị mkpa.
Ọ nweghị onye nbipụta nke oge a ga-arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na ị wụnye ngwanrọ kwesịrị ekwesị. Nke a bụkwa eziokwu maka Canon F151300. Ebe ọkwọ ụgbọala maka Canon F151300 Printer Onye ọrụ ọ bụla nwere nhọrọ maka ibudata onye ọkwọ ụgbọala ahụ na kọmputa ha. Ka anyi gbal ia igh ota ihe kariri n'ime ha.
Iji malite ịrụ ọrụ na ngwa nbipute, ịkwesịrị ịwụnye ngwanrọ kwesịrị ekwesị na PC gị. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ dị mfe. Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka HP LaserJet PRO 400 M401DN Nyere ọtụtụ ụzọ dị irè maka ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka onye nbipute, ị kwesịrị ịtụle nke ọ bụla n'ime ha.
Ọ dịghị ngwaọrụ ga-arụ ọrụ nke ọma n'enweghị ndị ọkwọ ụgbọala a họọrọ nke ọma, na n'isiokwu a, anyị kpebiri ịtụle otu esi arụnye ngwanrọ na ngwaọrụ Epson L350 multifunction. Ịwụnye ngwanrọ maka Epson L350 Ọ dị anya site n'otu ụzọ iji wụnye ngwanrọ dị mkpa maka ihe ntanetị Epson L350.
LaserJet 1200 Series printer adịghị apụta n'etiti ngwaọrụ ndị ọzọ yiri nke HP. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwere ike ịchọrọ ndị ọkwọ ụgbọala ọrụ maka ọrụ siri ike, a ga-akọwa nyocha na ntinye ya mgbe e mesịrị. HP LaserJet 1200 Series Drivers Ị nwere ike ịhọrọ site na ọtụtụ ụzọ ịchọ na budata ngwanrọ maka LaserJet 1200 Series.
Mustek's BearPaw 1200CU Plus scanner bụ ihe ngwanrọ oge ochie, ma onye ọrụ ahụ na-akwado ya, a na-emelite ọkwọ ụgbọala ya mgbe niile. N'isiokwu a, anyị ga-agbalị ịkọwa n'ụzọ zuru ezu banyere esi achọta ma budata faịlụ na ngwaọrụ a na kọmputa gị n'enweghị itinye ihe ọmụma ma ọ bụ nkà pụrụ iche.
Ọ dị mkpa ka ndị ọdepịa niile nwee ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị nke arụnyere na kọmpụta iji rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na usoro na ọrụ ahụ. O di nwute, ugbochi na ngwaike di ugbua, ya mere onye ozo gha etinye ya n'onwe ya.
Ọtụtụ ndị na-eleda ịdị mkpa nke ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala niile maka laptọọpụ. A na-eme nke a site na nchekwa data dị ukwuu nke software Windows, nke arụnyere na akpaghị aka mgbe ị wụnye sistemụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, onye ọrụ ahụ anaghị ege ntị na ngwaọrụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a.
Kaadị vidiyo bụ ihe dị mgbagwoju anya nke chọrọ nkwụnye nke ngwanrọ pụrụ iche. Usoro a anaghị achọ ihe ọmụma pụrụ iche site n'aka onye ọrụ ahụ. Ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala maka NVIDIA GeForce GT 520M E nwere ụzọ dị iche iche maka ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo dị otú ahụ.
Ụfọdụ ndị na-ebi akwụkwọ, nke gụnyere ụdị HP Laserjet 1020, jụrụ ịrụ ọrụ zuru oke n'enweghị ọnụnọ ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị na usoro. Akụrụngwa a chọrọ iji arụ ọrụ nke ngwaọrụ nwere ike ịwụnye site na ọtụtụ ụzọ, nke anyị ga-enyocha nyocha. Ebe ọkwọ ụgbọala maka HP Laserjet 1020 E nwere ụzọ ise dị mkpa maka nbudata ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka nbipute a.
Maka ọrụ zuru oke nke nyocha ahụ chọrọ software pụrụ iche na ejikọ ya na kọmputa. Ọ dị mkpa ịghọta ụzọ na ebe ọ kachasị mma ibudata onye ọkwọ ụgbọala ka ọ ghara imerụ ngwaọrụ na usoro ahụ. Ịwụnye ọkwọ ụgbọala maka HP Scanjet 3800 E nwere ọtụtụ ụzọ isi wụnye ọkwọ ụgbọala maka nyocha na ajụjụ. Ụfọdụ n'ime ha nwere njikọ na saịtị ndị ọrụ, ebe ndị ọzọ na-eme atụmatụ iji mmemme ndị ọzọ.
Onye na-agbachitere ụlọ ọrụ bụ onye a na-ahụ maka ahịa na kọmpụta kọmputa na ngwá ọrụ dị iche iche. Ha na-etinye aka na mmepụta nke ụmụ oke, keyboard, ndị ọzọ na-achịkwa, usoro okwu, ekweisi na ngwaahịa ndị ọzọ. Ngwaọrụ PC na-achọkarị ndị ọkwọ ụgbọala arụnyere, ọ bụghị naanị otu ụgbọ ụkwụ na-agba ọsọ.
O doro anya na ị chọpụtara na mgbe ị zụrụ ihe nbipụta ọhụrụ, ọ gaghị eme ngwa iji mezuo ọrụ ya, ịnweta iwu site na kọmputa nkeonwe. A na-edozi nsogbu ahụ site n'ịwụnye ọkwọ ụgbọ ala ibe gị. N'ụzọ dị mwute, ndị na-emepụta anaghị enye diski na software ndị bụ isi mgbe niile. Ịchọta na Ịwụnye Canon MF3010 Ọkwọ ụgbọala Na ọnọdụ a, ị nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka n'efu, ịmara naanị ihe nlereanya ha.
Ihe bụ isi kpatara enweghị ike iji rụọ ọrụ na onye nbipute bụ enweghị onye ọkwọ ụgbọala nke arụnyere na kọmpụta ahụ. N'okwu a, ngwa ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ ya ma jikọta ya na sistemụ. A na-edozi ọnọdụ a n'ụzọ dị mfe. Onye ọrụ ahụ ga-achọ ka ị bulite faịlụ site na usoro ọ bụla bara uru.